Indawo esembindini, kodwa izolile kwaye ipholile - I-Airbnb
Indawo esembindini, kodwa izolile kwaye ipholile
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguSabrina
Igumbi elihle, eliqaqambileyo nelizolileyo kumbindi weAschaffenburg nasecaleni kweyunivesithi (TH Aschaffenburg). Iipaki kunye nobomi basebusuku kwindawo ngqo. Indawo yokupaka yasimahla. Ibhayisekile ekhoyo ukuze ukhenkethe kuMlambo oMkhulu nakwi-Spessart (emahlathini). Ukufikelela ngokuthe ngqo kuhola wendlela i-A3 (umgama ukuya eFrankfurt 45 km) kunye noqhagamshelo oluthe gqolo lukaloliwe phakathi kwesixeko.
Ikofu yasimahla kunye neti, izitya ekwabelwana ngazo, ifriji kunye nesitovu. Ekuseni emva kokufika kwakho ungazinceda ngokukhululekileyo kwifriji yam ukuba kuyimfuneko.
"I-Bavarian Nice" i-Aschaffenburg sisixeko esihle kuMlambo omkhulu. Yeyommandla weRhine-Main kwaye ke ngoko inonxibelelwano oluhle (imoto / isiporo) kwizixeko ezinjengeFrankfurt am Main okanye iMainz. Ngaphandle kwesixeko kukho iSpessart eneendlela zayo ezintle zokukhwela intaba, iilali ezincinci kunye nokutya kweFranconia. I-Aschaffenburg ngumxube olungileyo wokuhlala ezidolophini nasezilalini. Abafundi kwakunye nemeko entle yezoqoqosho yase-Aschaffenburg ibonelela ngomoya wobuhlobo esixekweni.
Uya kukwazi ukuhamba ngokukhululekileyo kwindawo yam - ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela zisesandleni sakho nangaliphi na ixesha. Kwigumbi lakho unokonwabela ipiyano yombane. Kukho ibalcony encinci, ethi - kuba iliflethi engatshaywayo - inokuba nomdla kubantu abatshayayo. Andinikezeli isidlo sakusasa, kodwa kusasa emva kokufika kwakho ungazinceda ngokukhululekileyo kwifriji yam ukuba kuyimfuneko.
Ukuba ndinexesha, ndingakuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Ndithetha isiJamani kunye nesiNgesi kakuhle.
ISchloss Johannisburg, iScene yobugcisa kunye nobuchwephesha basekhaya, iFasanerie kunye neSchönbusch Park, iminyhadala kwiHolo yeSixeko, iStadttheater kunye nezinye iithiyetha ezininzi ezisecaleni, iiklabhu ezifana neColos-Saal, iihambo kunye nokhenketho lwebhayisekile ecaleni koMlambo Main, iikhefi, iindawo zokutyela, intle encinci. iivenkile ... kukho konke ukuze ube nexesha elimnandi!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aschaffenburg